ကျနော်တို့လူတွေ, ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမဖြစ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ဘယ်လိုနေသလဲ?
နည်းပြသင်တန်းများနှင့်အတူနေ့စဉ်အသက်တာ၌မဖြစ်နိုင်အောင်မြင်ရန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မဟာဗျူဟာသင်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်တာအလွန့်အလွန်ဆက်သွယ်မှုသင်တို့အဘို့အံ့မခန်းဖြစ်ရပ်များ, ထုတ်လုပ်။
မှော်၏မာစတာဖောက်သည်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း လိုက်. အကြီးအတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဆိုပါပြပွဲ, ဆက်သွယ်ရေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အနုပညာရှင်များကသိရှိစေရန်တစ်ဦးနည်းလမ်းများဖြစ်လာသည်။
မဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ပါတယ်နားလည်သဘောပေါက်။ ထိုအကို Magic ၏မာစတာအောင်မြင်ဖို့နည်းလမ်းသင်ပေးတယ်။ စိတ်ရောဂါအထူးကုမဿဲ Rampin နေဖြင့်ညှိနှိုင်းရေကန်ကနေတီထွင်ထုတ်လုပ်, Strange®ဒဿနိကဗေဒစဉ်းစားပါ, ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အပေါ်ပြပွဲ၏အစစ်အမှန်အချိန်လေးမှတဆင့်ပါးပညာရေးမက်ဆေ့ခ်ျများ, ad hoc လိုလားတဲ့ခိုင်မာတဲ့သိပ္ပံနည်းကျအခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်။
မှော်၏မာစတာကို Magic အစီအစဉ်များမကြာသေးမီ years.The 10 မာစတာအတွက်ချင်းရိုင်, Mediaset နှင့် Sky ပေါ်မှာအီတလီမှာထုတ်လွှင့်အားလုံးကိုအဓိကမှော်အစီအစဉ်များကိုအမြဲသူ့ရဲ့ဒဿန၏အောင်မြင်မှုကိုအတည်ပြု, ရှယ်ယာကွန်ယက်ကိုကျော်လွန်သွားပြီ, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်သဘောပေါက်ထားပါတယ် : ထူးခြားသောနှင့်ဆန်းသစ်ရှိုးပွဲကိုဖန်တီးရန်မှော်အနုပညာထောင်စုနှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့။ အများပြည်သူ၏ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုပဉ္စလက်ဟာအကောင်းဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအခါ, အံ့သြစေတယ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားကြောင်းပြသထားတယ်။
ဤ site GO!
CNH - ပြောင်းလဲခြင်းပါဝါဖြစ်ပါသည်
ပညာရေး - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပြတိုက်ရိုက်ပြသ - ပြောင်းလဲခြင်းတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏
ပြပွဲ၏တစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားအဘို့အလိုင်းပေါ်ထက်ပို 1 ဘီလီယံအမြင်များ ...
တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ - Big Show ကို
မှော် 2016 ၏မာစတာ
The Magic ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံရှစ်အများစုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ Wizards အားဖြင့် coveted နိုင်ငံတကာဆုချီးမြှင့် ...
IULM - ဖွင့်လှစ်ပညာသင်နှစ်တွင်
Walter Rolfo, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပညာရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေ6ခဲ့ ...
ပညာရေး - Keynote စကားပြော
RIVA DEL ဘဝါး - Dreamagic
အိပ်မက်နှင့်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားအကြားပြသဇာတ်စင်များအတွက်3အီတလီထူးခြားသောအခွက်တဆယ်
တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ - စီးပွားရေးပွဲများ
အီး '' ... အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရန်ဒြပ်စင်သည်အဘယ်မှာရှိညနေခင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ် ...
maw - သမားရိုးကျမဟုတ်သောညဥ့်
နှင့် '' ဖြစ်နိုင်သမျှ ... တစ်ညဦးနှင့်ထူးချွန်၏တစ်မူထူးခြားတဲ့ဆောင်ပုဒ်အတွက်ခိုင်ခံ့ ...